Factory Foot Mat Mat, Mpamatsy - China Car Mat Mat Manufacturer
Hoditra Upholstery automotive
Fitaovana mat amin'ny gorodona fiara
Mat-tongotra amin'ny fiara
Fitaovana seza fiara
Cushion seza fiara
Sarony seza fiara
Fametrahana mora foana Universal Auto hoditra seza Protec ...
Mats tongotra an-tongotra maharitra sy miaro TPE miaraka amin'ny Mainty ...
Fomba isan-karazany ny zaridaina amin'ny gorodona fiara
Fitaovana lamba anatiny vita amin'ny fiara vita amin'ny fiara mainty
Automotive Microfiber synthetic hoditra amin'ny voanjo Bu ...
Mpanamboatra China Suede Mahatsapa Mic-Free Sol ...
High Microfiber Auto hoditra miaraka amin'ny Competitiv ...
Eco-friendly Automotive Microfiber hoditra ho an'ny fiara M ...
Mats tongotra an-tongotra maharitra sy miaro TPE miaraka amin'ny loko mainty
Ny tsihy tongotra an'ny fiara Tens an'i Bensen dia tsy misy poizina, tsy misy fofona ary voasedra ny FDA, izay mahatonga azy ireo ho vokatra azo antoka tanteraka ho an'ireo mpanjifa matoky tena.
Ny tsihy tongotra TPE vita amin'i Bensen dia namboarina arak'ilay maodelin'ny fiara omenao, ary tsy hikatona ny valin'ny pedal gasikara, sns.
Mats tsara gorodona fiara TPE ho an'ny fiara
TPV modely fiarovana fiarovana ny tontolo iainana modely fiara tongotra mat no nandalo tamin'ny alàlan'ny fanamarinana manam-pahefana indrindra EU SGS orinasa ROHS10, fanamarinana formaldehyde. Ka rehefa mitondra ny fiara amin'ny toerana mitondra fiara tery izy ireo dia afaka mankafy tontolo tsy misy poizina tsy misy poizina, avo lenta ary milamina ny mpanjifa.
TPE Toeram-piaramanidina rehetra amin'ny gorodona
Mats namboarina manokana TPE gorodona ho an'ny Atitany Auto
China Factory Direct Sale TPE Car Foot Mats miaraka amin'ny vidiny lafo
Bensen dia manao fingotra TPE (thermoplastic elastomer) miaro amin'ny fiarovana premium miaraka amin'ny fetra avo iray izay manampy amin'ny fisorohana ny orampanala, rano, sira, fasika ary fotaka tsy ho voaloton'ny karipetra fiara. TPE rubber dia mahatohitra toetr'andro ary mandeha tsara amin'ny toetr'andro, na dia mangatsiaka be aza.
Mats tongotra an-tongotra avo lenta miaraka amin'ny vidin'ny orinasa
Product Mat-skid Car Mat miaraka amin'ny TPE Material
Telefaona: + 86-13381860818
Raha misy fanontaniana momba ny fiara sy ny loko anatiny, azafady mba mifandraisa amiko sy ekipa matihanina miasa ho anao